Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - Waxa aad akhrineyso xiga
Hordhac (cutubka 3.1)
Inta badan mawduucyada ku jira cutubkan ayaa sidoo kale lagu soo koobay cinwaanada ugu dambeeyay ee madaxweynenimada ee Aasaasiyadda Mareykanka ee Cilmi-baarista Dadweynaha (AAPOR), sida Dillman (2002) , Newport (2011) , Santos (2014) , iyo Link (2015) .
Wixii intaas ka badan oo ku saabsan farqiga u dhexeeya cilmi baarista iyo wareysiyada qoto dheer, fiiri Small (2009) . La xiriirka wareysiyada qoto dheer waxaa weeye qoyska qoysaska ee loo yaqaan 'ethnography'. Cilmi-baarista qowmiyadeed, cilmi-baarayaashu waxay guud ahaan waqti badan ku qaataan ka qaybgalayaasha jawigooda dabiiciga ah. Wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan farqiga u dhexeeya farshaxanka iyo wareysiyada qoto dheer, fiiri Jerolmack and Khan (2014) . Wixii intaa ka badan oo ku saabsan dadweynaha dadweynaha, fiiri Pink et al. (2015) .
Qeexitaankeyga taariikhda cilmi baarista sahanku waa mid aad u kooban oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah horumarka xiisaha leh ee dhacay. Wixii taariikh nololeed oo badan, fiiri Smith (1976) , Converse (1987) , iyo Igo (2008) . Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saddexda erey ee daraasaddan cilmibaadhista ah, eeg Groves (2011) iyo Dillman, Smyth, and Christian (2008) (taas oo ka dhigaysa saddexda xilli ee kala duwan).
Groves and Kahn (1979) bixiyaan falanqeeyn gudaheed inta u dhaxaysa bilawga koowaad illaa labaad ee cilmi baarista sahanka adoo samaynaya isbarbardhiga tafatiran ee madaxa-u-dhexeeya ee u dhexeeya waji-waji iyo fool-ka-telefoonka. ( ??? ) dib ugu noqoshada horumarka taariikheed ee hababka kala-soocista ee khadka ah.
Faahfaahin dheeraad ah sida cilmi-baarista daraasadihii hore loo baddalay iyadoo ka jawaabeysa isbedelka bulshada, fiiri Tourangeau (2004) , ( ??? ) , iyo Couper (2011) .
Weydiinta ka soo horjeeda (qaybta 3.2)
Xoogga iyo daciifnimada ee weydiista iyo indha-indheynta ayaa ka dooday cilmu-nafsiga (tusaale, Baumeister, Vohs, and Funder (2007) ) iyo cilmi-nafsiga (tusaale ahaan, Jerolmack and Khan (2014) ; Maynard (2014) , Cerulo (2014) ; Vaisey (2014) Jerolmack and Khan (2014) . Farqiga u dhexeeya weydiinta iyo indha-indheynta ayaa sidoo kale soo baxa dhaqaalaha, halkaas oo cilmi-baarayaashu ay ka hadlaan Jerolmack and Khan (2014) doorashooyinka Tusaale ahaan, cilmi-baaruhu wuxuu waydiin karaa jawaabeyaasha haddii ay doorbidaan cunista jalaatada ama tagista jimicsiga (waxay doorbidaan doorashooyinka), ama waxay arki karaan inta jeer ee ay dadku cunaan jalaatada oo ay tagaan jimicsiga (shuruudaha shaaca ka qaaday). Waxaa jira shaki weyn oo ku saabsan noocyada qaar ka mid ah doorbidyada codsiyada ee dhaqaalaha sida lagu qeexay Hausman (2012) .
Mawduuca ugu muhiimsan ee ka soo baxa doodahaani waa in lagu soo warramey anshaxu mar walba sax ahayn. Laakiin, sida lagu sharraxay cutubka 2, ilaha xogta waaweyni maaha mid sax ah, waxaa laga yaabaa inaan lagu ururin dulsaar ah, waxaana laga yaabaa inaanay heli karin cilmi-baarayaasha. Sidaa darteed, waxaan u maleynayaa, xaaladaha qaarkood, dabeecadda la soo sheegey ayaa noqon karta waxtar. Dheeraad ah, mawduuc labaad oo ka mida doodahaasi waa warbixinta ku saabsan dareenka, aqoonta, rajooyinka, iyo ra'yiga ma aha mid sax ah. Laakiin, haddii xogta ku saabsan dawladaha gudaha ah ay u baahan yihiin cilmi-baadhayaasha-sidoo kale inay ku caawiyaan sharaxaad ka bixinaya dabeecadaha qaarkood ama sida loo sharaxo-markaa way weydiisan kartaa inay habboon tahay. Dabcan, barashada ku saabsan dawladaha gudaha adoo waydiinaya su'aaluhu waxay noqon karaan dhibaato sababtoo ah mararka qaarkood jawaab bixiyeyaashu iskood uma ogaanayaan waddankooda gudaha (Nisbett and Wilson 1977) .
Wadarta qaladka sahanka (cutubka 3.3)
Cutubka 1aad ee Groves (2004) qabaa shaqo aad u fiican oo ka soo horjeeda eraybixin aan caadi aheyn oo ay isticmaalaan cilmi-baadhayaasha sahanka si ay u sharaxaan qaab-dhismeedka qaldan ee qalabka sahanka. Wixii daaweyn dherer dherer ah ee wadarta guud ee qalabka sahanka, fiiri Groves et al. (2009) , iyo aragti guud oo taariikheed, eeg Groves and Lyberg (2010) .
Fikradaha kala-jajabinta khaladaadka iyo kala-duwanaanta ayaa sidoo kale soo koraya barashada mashiinka; arag, tusaale ahaan, qaybta 7.3 ee Hastie, Tibshirani, and Friedman (2009) . Tani waxay badanaa u horseedaa cilmi-baarayaasha in ay ka hadlaan "faquuqid-is-weydaarsi" ganacsi.
Marka la eego matxafka, soo bandhigid weyn oo ku saabsan arrimaha aan waxqabadka lahayn iyo ficil la'aanta jawaab-celinta waa Warbixinta Guddiga Cilmi-baarista Qaranka Dib-u-eegis ku Saabsan Daraasadaha Sayniska Bulshada: Agenda Research (2013) . Mawduuc kale oo faa'iido leh waxaa bixiya Groves (2006) . Sidoo kale, dhammaan arrimaha gaarka ah ee Jariidada Tirakoobka rasmiga ah , Ra'yiga Dadweynaha Saddex-biloodlaha ah , iyo Annals-ka Akademiga Maraykanka ee Siyaasadda iyo Bulshada Soomaliya ayaa lagu daabacay mawduuca aan wax jawaab ah lahayn. Ugu dambeyntii, waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo xisaabinayo heerka jawaabta; hababkan soo socda ayaa si faahfaahsan loogu sharraxay warbixinta ay soo saartay Ururka Cilmi-baarista Dadweynaha ee Maraykanka (AAPOR) ( ??? ) .
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sanadka 1936-ka ee tirakoobka suugaanta , fiiri Bryson (1976) , Squire (1988) , Cahalan (1989) , iyo Lusinchi (2012) . Dood kale oo ka mid ah ra'yiururintaan oo ah digniin Gayo-Avello (2011) ah oo ka soo horjeeda ururinta xogta, eeg Gayo-Avello (2011) . Sanadkii 1936-kii, George Gallup wuxuu adeegsaday nooc ka mid ah tijaabada oo lagu tijaabiyey oo wuxuu awooday inuu soo saaro qiyaaso sax ah oo tiro yar oo tijaabo ah. Guuldarradii Gallup ee ka soo baxday Qoraalka Digest wuxuu ahaa guul muhiim u ah horumarinta cilmi baarisyada sida ku cad cutubka 3 ee @ converse_survey_1987; cutubka 4 ee Ohmer (2006) ; iyo cutubka 3 of @ igo_averaged_2008.
Marka la eego qiyaasta, ilo muhiim ah oo loogu talagalay sameynta su'aalaha waa Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) . Wixii daaweyn dheeraad ah oo dheeraad ah, fiiri Schuman and Presser (1996) , oo si gaar ah diiradda u saaran su'aalaha dabeecadda, iyo Saris and Gallhofer (2014) , taas oo ah guud ahaan. Qaab yar oo ka duwan habka cabbiraadda waxaa lagu qaadaa psychometrics, sida lagu qeexay ( ??? ) . Waxyaabo badan oo ku saabsan horjoogsiga waxaa laga helaa Presser and Blair (1994) , Presser et al. (2004) , iyo cutubka 8 ee Groves et al. (2009) . Wixii dheeraad ah ee ku saabsan tijaabada sahanka, fiiri Mutz (2011) .
Marka la eego qiimaha, daaweynta, qiyaasta muddada-dheer ee ganacsiga-udhaxeeya kharashka sahanka iyo qaladaadka sahan waa Groves (2004) .
Yaa weydiisanaya (qaybta 3.4)
Särndal, Swensson, and Wretman (2003) daweyn oo qiyaas ah oo qiyaasta ah oo lagu qiyaaso imtixaanka waa Lohr (2009) ( Särndal, Swensson, and Wretman (2003) ), iyo Särndal, Swensson, and Wretman (2003) ). Särndal and Lundström (2005) waa hab daaweyn ah oo dhererkeedu dhan yahay. Meelaha qaarkood, cilmi-baarayaashu waxay yaqaana waxoogaa ku saabsan xayawaanka, kuwaas oo aan inta badan dhab ahaantii run ahaantii runta u lahayn. Noocyada kala duwan ee isbedel la'aanta aan wax jawaab ah ayaa suurtagal ah marka cilmi-baarayaashu ay hayso macluumaad ku saabsan kuwa aan loo baahnayn, sida lagu sharxay Kalton and Flores-Cervantes (2003) iyo Smith (2011) .
Daraasadda Xbox ee W. Wang et al. (2015) wuxuu isticmaalaa farsamo la yiraahdo regression multitude and post-stratification ("Mr. P.") kuwaas oo u oggolaanaya cilmi-baarayaasha in ay qiyaasaan kooxdu macnaheedu waa xitaa marka ay jiraan kooxo badan oo badan. Inkasta oo ay jiraan doodo ku saabsan tayada qiyaasaha farsamadan, waxay u muuqataa meel lagu kalsoon yahay oo lagu baadho. Park, Gelman, and Bafumi (2004) waxaa markii hore loo isticmaalay Park, Gelman, and Bafumi (2004) , waxaana jiray Park, Gelman, and Bafumi (2004) iyo doodo dambe (Gelman 2007; Lax and Phillips 2009; Pacheco 2011; Buttice and Highton 2013; Toshkov 2015) . Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xiriirka miisaankaga shakhsi ahaaneed iyo miisaanka kooxda, fiiri Gelman (2007) .
Nidaamyada kale ee miisaaniyeynta webka, fiiri Schonlau et al. (2009) , Bethlehem (2010) , iyo Valliant and Dever (2011) . Qeybaha internetku waxay isticmaali karaan sambal laga yaabo inay dhacaan ama sifududnaanta aan la qiyaaseynin. Wixi dheeraad ah oo ku saabsan shabakadaha internetka, fiiri Callegaro et al. (2014) .
Marmarka qaarkood, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in shaybaarro suurtagal ah iyo shay aan macquul ahayn ay qiyaasaan tayada la midka ah (Ansolabehere and Schaffner 2014) , laakiin isbarbardhiga kale waxay ogaadeen in shaybaarada aan ka dhicin inay ka sii darayso (Malhotra and Krosnick 2007; Yeager et al. 2011) . Sababaha suuro galka ah ee kala duwanaanshahan waxaa weeye in shaybaarada aan lahayn ixtimaalka ay soo fiicnaadeen wakhti ka dib. Si aad u aragto aragti dheeraad ah oo ah hababka saami-sameynta ah ee aan la dhisi karin, waxaad eegtaa AAPOR Task Force on Sampling Sampling (Baker et al. 2013) , waxaanan sidoo kale ku talinaynaa in aan akhriyo faallo ku saabsan warbixinta kooban.
Sidee loo codsanayaa (qaybta 3.5)
Conrad and Schober (2008) waa munaasabad la sameeyay oo lagu magacaabo 'Interview Survey' ee mustaqbalka , waxayna bixisaa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan mustaqbalka su'aalaha. Couper (2011) cinwaanno isku mid ah, iyo Schober et al. (2015) bixisaa tusaale wanaagsan oo ah sida hababka ururinta xogta ee loogu talagalay goob cusub taas oo keeni karta xog tayo sare leh. Schober and Conrad (2015) bixiyaan dood guud oo ku saabsan sii wadida sidii loo hagaajin lahaa nidaamka cilmi baarista si loo helo isbeddelka bulshada.
Tourangeau and Yan (2007) arimaha dib-u-eegista rabitaanka bulshada ee su'aalaha xasaasiga ah, iyo Lind et al. (2013) bixiya sababo macquul ah oo ay dadku u sheegi karaan macluumaad dheeraad ah oo xasaasi ah wareysiga kombuyuutarka. Waxyaabo badan oo ku saabsan doorka wareysiga dadka ku wareysanaya ee kordhinaya heerarka kaqeybgalka ee baaritaannada, eeg Maynard and Schaeffer (1997) , Maynard, Freese, and Schaeffer (2010) , Conrad et al. (2013) , iyo Schaeffer et al. (2013) . Wixii dheeraad ah ee ku saabsan sahaminta isku dhafan, fiiri Dillman, Smyth, and Christian (2014) .
Stone et al. (2007) bixisaa daaweyn mudo-dheer oo ku saabsan qiimeynta xasaasiga ah ee hab-nololeedyada iyo hababka la xiriira.
Wixii talooyin dheeraad ah oo ku saabsan samaynta sahammada waayo-aragnimo farxad leh iyo qiimo leh oo ka-qaybgalayaasha ah, ka eeg shaqada ku saabsan Habka Naqshadeynta Qarsoon (Dillman, Smyth, and Christian 2014) . Tusaalayaal kale oo xiiso leh oo isticmaalaya barnaamijyada Facebook ee cilmi-baarista cilmiga bulshada, eeg Bail (2015) .
Daraasado ku xiran ilaha xogta weyn (qaybta 3.6)
Judson (2007) sharxayaa habka isku-daba-marinta daraasadaha iyo xogta maamulka sida "isdhexgalka macluumaadka" waxayna ka wadahadlaan faa'iidooyinka habkan, iyo sidoo kale bixinta tusaalayaal.
Marka laga hadlayo weydiinta qancin, waxaa jiray isku dayyo hore oo hore loogu ansixiyay cod bixinta. Wixii guud ee suugaantaas, fiiri Belli et al. (1999) , Ansolabehere and Hersh (2012) , Hanmer, Banks, and White (2014) , iyo Berent, Krosnick, and Lupia (2016) . Eeg Berent, Krosnick, and Lupia (2016) si aad uga walaacsan tahay natiijooyinka lagu soo bandhigay Ansolabehere and Hersh (2012) .
Waxaa muhiim ah in la ogaado inkasta oo Ansolabehere iyo Hersh lagu dhiirigeliyay tayada xogta laga soo qaatay Catalist, qiimaha kale ee iibiyeyaasha ganacsiga ayaa aad u xiiso badan. Pasek et al. (2014) heshay tayad liidata marka xogta laga helay sahanku la barbardhigay faylka macaamiisha ee Nidaamyada Suuq-geynta (kaas oo laftiisu isku darsaday xogta sadexda bixiyeyaasha: Acxiom, Experian, iyo InfoUSA). Taasna, feylka xogtu ma uusan dhigan jawaabaha sahanka ee ay cilmi-baarayaashu filayaan inay sax yihiin, faylka macaamiilku uu ka maqnaa xog badan oo su'aalo ah, iyo qaabka xogta oo la la'yahay ayaa la xidhiidhay qiimaha sahan ee la soo sheegay (si kale loo dhigo, xogtu waxay ahayd mid nidaamsan, aan kala duwaneyn).
Wixii intaas ka badan oo ku saabsan isku xirka diiwaanka u dhaxeeya baaritaanyada iyo xogta maamulka, fiiri Sakshaug and Kreuter (2012) iyo Schnell (2013) . Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan isku xirka diiwaanka guud, eeg Dunn (1946) iyo Fellegi and Sunter (1969) (taariikhiga) iyo Larsen and Winkler (2014) (casri). Nidaamo kuwan oo kale ah ayaa sidoo kale lagu horumariyey sayniska kombiyuutarka sida magacyada sida macluumaadka qeexaya, tusaale ahaan aqoonsiga, isku-habaynta magaca, helitaanka isku- (Elmagarmid, Ipeirotis, and Verykios 2007) iyo diiwaanka duubista duubista (Elmagarmid, Ipeirotis, and Verykios 2007) . Waxa kale oo jira habab qarsoodi ah oo ilaalin ah si loo diiwaan geliyo xiriirka aan u baahnayn gudbinta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aqoonsiga (Schnell 2013) . Cilmi-baarayaasha Facebook-ka waxay soo saareen nidaam si ay ula-xiriiraan diiwaankooda si ay u ansixiyaan habdhaqanka cod-bixinta (Jones et al. 2013) ; Xiriirintan waxaa loo qabtay si loo qiimeeyo tijaabo aan kuu sheegi doono cutubka 4 (Bond et al. 2012) . Wixii dheeraad ah ee ku saabsan helitaanka oggolaanshaha isku xirka diiwaangelinta, fiiri Sakshaug et al. (2012) .
Tusaale kale oo lagu xiriirinayo baaritaan bulsheed oo ballaadhan oo ku saabsan diiwaanka maamulka dawladda ayaa laga soo qaatay Sahanka Caafimaadka iyo Hawlgabka iyo Maamulka Amniga Bulshada. Wixii dheeraad ah ee daraasaddan, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan habka oggolaanshaha, fiiri Olson (1996, 1999) .
Nidaamka isku dhafka ilaha badan ee diiwaannada maamulka ee loo yaqaan 'vattenfile' - qaabka uu adeegsanayo Catalist-wuxuu ku badan yahay xafiisyada tirakoobka dawladaha qaranka qaarkood. Laba cilmi baarayaal oo ka socda Iswiidhan ayaa ku qoray buug faahfaahsan mawduuca (Wallgren and Wallgren 2007) . Tusaale ahaan habkan oo ku yaalla hal gobol oo ku yaalla Mareykanka (Olmstead County, Minnesota, guriga Mayo Clinic), fiiri Sauver et al. (2011) . Wixii kusaabsan khaladaadka laga yaabo inay ka muuqdaan diiwaanada maamulka, fiiri Groen (2012) .
Qaab kale oo ay cilmi-baarayaashu u isticmaali karaan ilaha xogta ilaha xogta sahan ee cilmi-baarisku waxay u tahay qaab shaxan oo loogu talagalay dadka leh sifooyin gaar ah. Nasiib darro, qaabkani wuxuu kicin karaa su'aalaha la xidhiidha asturnaanta (Beskow, Sandler, and Weinberger 2006) .
Marka laga hadlo su'aalaha la weydiiyay, habkan cusub ma ahan mid cusub sida uu uga muuqan karo sida aan u sharaxay. Waxay leedahay xiriiro qotodheer u ah saddex qaybood oo waaweyn oo tirakoob: tirakoobka ku salaysan qaab-dhismeedka (Little 1993) , sumcad (Rubin 2004) , iyo qiyaasta aagga yar (Rao and Molina 2015) . Waxay sidoo kale la xiriirtaa isticmaalka beddelaadaha ku-meel-gaadhka ah ee cilmi-baarista (Pepe 1992) .
Qiimaha iyo waqtiga qiyaasta ee Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) waxay u badan tahay qiimaha isbeddelka-kharashka hal sahan oo dheeri ah - oo aan ku jirin kharashyada joogtada ah sida kharashka nadiifinta iyo ka shaqeynta xogta telefoonka. Guud ahaan, codsiyada dheeraadka ah waxay u badan tahay inay leeyihiin kharashyada joogtada ah iyo kharashyada hooseeya ee la midka ah kuwa tijaabooyinka dijitalka ah (fiiri cutubka 4). Wixii dheeraad ah oo ku saabsan sahanada telefoonka ku salaysan ee dalalka soo koraya, fiiri Dabalen et al. (2016) .
Wixii fikrado ah oo ku saabsan sida loo sameeyo xoojinta su'aalaha si fiican, waxaan kugula talin lahaa inaad waxbadan ka baratid sinaan badan (Rubin 2004) . Sidoo kale, haddii cilmi-baarayaashu ay sii kordhiyaan xannaanada oo ku saabsan tirooyinka wadarta, halkii ay ka ahaan lahaayeen sifooyin shakhsiyadeed, markaa qaababka King and Lu (2008) iyo Hopkins and King (2010) ayaa faa'iido leh. Ugu dambeyntiina, wax badan oo ku saabsan habka barashada mashiinka ee Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) , fiiri James et al. (2013) (Hordhac) ama ' Hastie, Tibshirani, and Friedman (2009) ).
Mid ka mid ah arrin anshax leh oo ku saabsan su'aalaha la weydiiyay ayaa ah in la isticmaali karo si loo yareeyo sifooyinka xasaasiga ah ee ay dadku u dooran kari waayeen inay ku muujiyaan sahan sida ku cad Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) .